DOWNLOAD FACETIME FOR PC hwindo 7, 8 & hwindo 10 🤑
Zvita 22, 2019 by Facetime Guide Leave a Comment
Hello Facetime Anoda! Uri kuvhiringidzika sei unogona gadza facetime kwako Window yori akaita Facetime nokuti Window 7, Facetime nokuti Window 8 kana Kunyange kana uchida kukopa uye dzishandise facetime pahwindo rako 10 uchishandisa maitiro watevera ino?
Download facetime nokuti yori
facetime nokuti mahwindo yori 10
unogona facetime pakombiyuta
facetime nokuti yori Download
Pano munyaya ino, Ndapa mazano nyore uye mazano paunga- kushandisa kwako kufarira Anwendung facetime mabasa ari hwindo papuratifomu.
Kana uri kushandisa hwindo Laptop uye tinoda Download facetime nokuti mahwindo 7 Laptop ipapo mumwe nomumwe uye zvose akafukidza munyaya ino chete kunotevera nyore muitiro rakapiwa pazasi.
Facetime ne Apple Inc. chimwe chezvinhu dyidzana, anobatsira uye pakupedzisira videotelephony Software kuti chachinja yose. In ichi digitaalinen panguva, munhu wose anoda kuramba chokuita mumagariro nevamwe.
Achibatsirwa Face nguva, unogona Sezvineiwo kuita zvose vhidhiyo uye ekuteerera anodana kuramba dyidzana wenyu nharaunda. Nokufamba kwenguva, kushandiswa kwaiitwa FaceTime app yave zvikuru yakawedzera pakati Apple mano vanoshandisa.
Anwendung Izvi yemakwikwi kubva vamwe sezvo anobvumira kuitisa Wekumusoro yepamusoro mavhidhiyo uye zvakarekodhwa zvinoda. Maererano nokutsvakurudza, vanhu vakawanda vane Apple mano kusanganisira iPad, iPhone, Mac, uye iPod vari kushandisa FaceTime kuti vanogara dzavo nyika pachavo uye ezvokutengeserana.
pakutanga, Face Time akanga chete rakagadzirirwa Apple mano. Asi nokuda kwayo vakarongeka kuita uye kudiwa, zvino unogona kukopa FaceTime nokuda PC. Ko kuti zvinofadza? The Kukurukura nzira kwachinja zvachose zvino.
Vanhu vanosarudza kuita zvakawanda Video uye makaseti foni pane e-mail kana pakombiyuta. Achibatsirwa ichi akangwara Anwendung kuti Fact Time, unogona nyore kutaura kana kuona munhu akagara pose pasi pose.
Mune dzimwe nyika sezvakaita US uye UK, vanhu vakawanda vari kushandisa Apple namano izvo zvinoita inobatsira kuti kuramba chokuita nevamwe Apple namano vanoshandisa.
Asi mune dzimwe nyika, vatengi vanosarudza kushandisa PC nokuda kwavo zuva digitaalinen mabasa. Saka kuunza zororo vanoshandisa dzakadaro, munyaya ino achatungamirira sei kuti zvakanaka kushandisa iOS Anwendung uri woga makombiyuta. Izvi zvinoita kuti anobatana nemamwe vanhu vari kushandisa akasiyana Apple namano.
Saka ramba uchiverenga nyaya ino kana uchida kukopa, gadza uye kumhanya vanomirira Anwendung kuti Echokwadi Time kwako Personal Computers.
1 Download uye dzishandise Facetime App For PC:
2 Sei Download uye kuisa FaceTime nokuda PC?
2.2 Zvinoumba FaceTime App pamusoro PC yako:
Download uye dzishandise Facetime App For PC:
yemanyorero, Apple ane mu-akavaka Anwendung pamusoro FaceTime pamusoro mano ose kusanganisira iPhones, iPods, iPads, uye Mac. Asi hamugoni kuwana pfungwa iyi iri PC yako. For chinangwa ichi, unofanira kuisa Face Time muchishandisa emulator. Izvi kudhanilodha kwacho kunosanganisira anotevera matanho:
Chekutanga, unofanira kukopa iPadain emulator. Unogona kuva naro nokushandisa kupiwa batanidzo: ipadian.net
Mushure kudhanilodha iPadian emulator, yakazaruka ayo faira uye dzishandise izvozvo maererano kupiwa zvinodiwa uye mirayiridzo.
ndokubva, kamwe iPadian emulator yako yakaiswa, zvino unogona kurivhura uye danda riri nokupa zvaida mashoko. danho iri rinoda renyu Apple ID uye pasiwedhi.
Zvino unogona kuva yako FaceTime Anwendung. Asi kana imi hamugoni kuwana zvino unogona kukopa nyore tichibatsirwa of Apple App Store chirongwa.
Pakupedzisira, kupinda chero kuonana ose Apple nyika achishandisa kwayo Email, mushandisi ID kana nhamba uye kutanga kuita maCD kana mavhidhiyo vachidzifudza. Unogona kuita izvi kuburikidza nekudzvanya vhidhiyo kana telephonic kuvake anopiwa Anwendung.
Sei Download uye kuisa FaceTime nokuda PC?
Munogonawo kushandisa facetime pamusoro PC yako apa zvishoma matanho nyore zviri sezvinotevera:
Facetime musi PC kunobvira pashure kudhanilodha Bluestacks ako PC.
Unogona kukopa mafomu bluestacks kubva pamutemo yepaIndaneti bluestacks.com.
pashure kudhanilodha Bluestacks, gadza nayo uye kamwe dhanilodhi rinopedzisa, restart kwenyu PC.
Zvinotora maminitsi mashoma kuti initialize pashure nezvekutanga Bluestack mafomu. Regai kumanikidza pedyo, kungaguma ari uori Software.
Pakangotanga PC restart, akazaruka bluestacks kushanda munyika ino yenyu.
Enda Muterere uye tinya kutamba chitoro kushanda.
Mushure kuzarura Play Store, Click on kutsvaka uye mhando Facetime uye ipapo Download facetime kuti mahwindo yori.
Kuisa Facetime pakarepo, baya Open kana Run, uye ipapo kutevedzera mirayiridzo pamadziro ako. *Kana uri chakaita kuti anotarisira pasiwedhi kana chisimbiso, kutaipa mashoko pasiwedhi kana kupa chisimbiso.
Kuisa FaceTime gare gare, baya Save, uye ipapo kukopa chokugadza faira kuti kombiyuta yako. Paunenge wagadzirira kuisa FaceTime, watinya kaviri faira, uye ipapo kutevedzera mirayiridzo pamadziro ako. *Uyu nani pfungwa nokuti unogona atarise chokugadza faira nokuda nemavhairasi usati mberi.
Vomurova FaceTime pamusoro PC yako.
Kushandisa Face Time pamusoro PC Your?
Pashure nekuisa kwako kufarira Anwendung pamusoro Face Time pamusoro PC yako, unofanira kutevera zvinokosha matanho kutanga kurishandisa:
Mushure kudhanilodha uye kugadzwa, nokuparura FaceTime Anwendung. Unogona kuita izvi kuburikidza chete nekudzvanya pamusoro wayo forodha.
Kana iwe vomurova Anwendung ichi kokutanga, unofanira kupinda email ID uye nhamba dzenhare. Izvi zvinobatsira kuti wako ID inogona kushandiswa nevamwe vanoshandisa kuonana iwe. Kana uine ID, unogona kurishandisa zvimwe unogona kugadzira mutsva mukati masekonzi mashoma
Pashure Login muitiro, muchawana wekushandisa Panel parutivi rwako FaceTime Anwendung rworuboshwe. mapuranga Izvi zvinosanganisira mazita vanhu vose naye uchida kubatanidza.
Tsvaga munhu unoda kutanga kukurukura. Kana uchishandisa FaceTime pamusoro PC, unogona chete kutaura chero munhu kana uchiziva kwavo Email kero.
shure kwaizvozvo, unofanira kumirira raundi-up pachirongwa.
Zvino kana mumwe User richabatwa foni yako, muri zvose kuisa kuona hwakanakisisa vhidhiyo kana Audio kufona.
Ndapedza kukurukura kwako, unogona kungoti tinya End Call bhatani kumisa chikumbiro.
Zvinoumba FaceTime App pamusoro PC yako:
Izvi zvinoshamisa videotelephony App ane zvakawanda uye hunopa kunoshamisa mibairo vatengi ayo. Vamwe kwayo dzinonakidza zvinhu zviri:
Anwendung iyi inorapa akagadzirirwa Video kudana. The inokosha pfungwa iri kuti vanhu batanidza uye ndigoiita pedyo tichibatsirwa mavhidhiyo zvikumbiro.
software iyi chakagadzirirwa kuitira kuti unogona kunakidzwa yepamusoro zvisarudzo kuti mavhidhiyo vachidzifudza. Mashoko akanaka ari Face Time yava kutsigira 1080p musi Personal Computers.
Kuti tiwane izvi, maitiro enyu anofanira kuva-akavaka Camera. Uye kana musingadi kuwana kamera zvino unogona kutenga Webcam.
The Face Time rinopawo widescreen 16:9 zvinhu. Izvi zvinopa mukana wakanakisisa kudanwa ruzivo kana uchida kubatanidza nevamwe vanoshandisa.
Nokuda unhu kwayo uye kubudirira, Anwendung uyu sechinhu yakanakisisa sezvo zvichienzaniswa vakwikwidzi ayo kusanganisira mutumwa, Skype, Google navaviri uye zvakawanda.
Good Audio kufona:
Kuwedzera rakasiyana paIndaneti inoti, unogona kushandisa Audio kufona mikana. Rinewo inzwi unhu zvikuru akanaka pasinei daro
Mufananidzo muna Picture Feature:
Izvi zvinobatsira kuti kutarisa nani nokuratidza mufananidzo wako duku kudivi uchiri wakabatikana pamwe kudanwa kwenyu.
mushandisi- Friendly inowanikwa
Chimwe chakanakira yemakwikwi pakati FaceTime pamusoro PC yako, izvozvo ane zvinoyemurika User-ushamwari inowanikwa. Zviri nyore, tsvedzerera, uye nyore. Munhu anogona kushandisa uye kurinzwisisa kwazvo zvakakodzera. Ichi ndicho chikonzero kuti vanoshandisa vakawanda zvachose anoda FaceTime Anwendung kubudikidza Apple.
Nokuti kwenyu zvakavanzika uye kuchengeteka, unogona kumisa zvachose. Kana munhu Vanongogara kana muchishungurudza iwe, zvose iwe kuita kuvhara kuti munhu nokupinda zita rake misa-pasi
Mukuwedzera iyi, Face Time anopawo vamwe anoyevedza zvinhu
• Unogona kusvika nyore yako kutsvakwa kuonana nekungoti uchishandisa Apple ID kana runhare nhamba yavo.
• Unogona kunakidzwa boka runhare kuburikidza FaceTime. Sezvineiwo, Anwendung ichi inoita kuti anobatana kuti 32 vanozvishandisa pamwe
• Kuti unakirwe uye dyidzana kukurukura, unogona kushandisa Stickers uye Animoji
• Munguva Video vachidzifudza, unogona kushandisa makamera enyu nenzira mbiri
Unogona kuratidza chiso chako nokushandisa kamera nechemberi PC kana
Unogona kushandisa shure kamera kuti shamwari dzako kuona zvauri kuona
• Kuti tiwane uchikurukura nevadiwa vako nokukurumidza, unogona kuita zvako Favorites.
• Unogona kunakidzwa Face Time pedyo kana WI-Fi kana wako date kubatanidza
• Unogona kushandisa Anwendung ichi mumitauro zvichienderana pamusoro zvaunofarira
Ndinovimba kuti nyaya azadzika zvose zvaunoda kushandisa facetime pamusoro PC yako. Kana muine mibvunzo, regai kutaura zviri mhinduro bhokisi. Ini ichapindura mubvunzo wako uye kugadzirisa queries dzenyu.
Ungashandisa Apple Watch nokuda Music Vasina Phone
Download FaceTime nokuti Windows